Ugu Weyn Ee Blackberry Natchez
Doorashada noocyo cusub oo barkiis ah si ay u koraan beertaada
Garden BlackBerry Garden - warshad aad u miro iyo aad u fudud in la nadiifiyo. Xitaa qof aan lahayn wax khibrad xoolaad ah wuxuu la qabsan karaa beerashadiisa. Dhaqankan ma aha mid caadi ah maanta, laakiin caankiisuna waa sii kordhayaa. Sannad kasta noocyo cusub ayaa u muuqda. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa ku saabsan beerta beerta, iyo si kaamil ah oo ku saabsan qaar ka mid ah noocyo kala duwan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Blackberry Natchez 2020